ရန်ကုန်က ဂျပန်နဲ့ ကားဖက်စပ် ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုမှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟပြောဆိုချက် (မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ...) ~ ဒီမိုဝေယံ
ရန်ကုန်က ဂျပန်နဲ့ ကားဖက်စပ် ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုမှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟပြောဆိုချက် (မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ...)
ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံက အဲ့ဒီတုန်းက Double Cab တွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်.. စက်ရုံဆိုလို့ အထင်တော့ မကြီးနဲ့ဦး နှစ်ရက်နေမှ (၁)စီးပဲ ထုတ်နိုင်တာပါ...။ တစ်လမှ ၁၅စီးနဲ့ တစ်နှစ်မှ အစီး (၃၀၀) ကျော်လောက်ပါ..။ စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာ ၁၅ယောက်လောက်နဲ့ပေါ့ ပစ္စည်းအပိုင်းအစ(Parts)တွေ အားလုံးကို ဂျပန်က မှာယူတာလေ..။ ဒီမှာ ကားတစ်စီးလုံး ဖြစ်အောင်.. ပြန်ဆင်တာဆိုတော့ စက်ရုံအဆင့်လို့တော့ ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ.။ အဲ့ဒီကားတွေကို ဂျပန်မှာရောင်းတာ အသစ်မှ ဒေါ်လာ ၂သောင်း၂ထောင်လောက်ပဲ ကျတာလေ..။ အဲ့ဒီကားတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ ၂သောင်း၅ထောင်နဲ့ ပြန်ရောင်းပြီး သိန်း၃၀လောက်ပဲ အမြတ်ယူပြီး ပြန်ရောင်းရတာလေ..။ ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို ရောင်းရတာ မဟုတ်ပဲ.. သူတို့စစ်တပ်ကို ပြန်ရောင်းရတာ.. သူတို့ကိုပဲ ချပေးရတာ အဓိက ဦးပိုင်ကိုပေါ့... ဦးပိုင်က ဗိုလ်မှုးကြီး အဆင့်ကနေ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ထိ ရကြတာလေ.. ဥပမာ အကိုက ဗိုလ်မှုးကြီးဆိုရင် ဦးပိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး လက်မှတ်နဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးဘယ်သူ ဘယ်သူကိုချပေးလိုက်ပါဆိုပြီး ပါမစ်ထွက်လာတယ်...။ ဒီကားတွေက ဗိုလ်မှုးကြီး အဆင့်နဲ့ အထက်ပဲချပေးတာနော်... အခြားအဆင့်မရဘူး.. အဲ့ဒီတော့ ပါမစ်ရတဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးက အပြင်မှာ သိန်း၈၀၀ကျော်လောက် ပေါက်ဈေးရှိတဲ့ ကားကို သိန်း ၂၅၀နဲ့ ဝယ်လို့ရသွားပြီပေါ့.. အဓိကသူတို့က အဲ့ကားတွေ စီးတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ကားဝယ်ဖို့ ငွေမလောက်တဲ့ တစ်ချို့ဗိုလ်မှုးကြီးတွေက ကုလားပွဲစားကို သိန်း၇၀၀ နဲ့ရောင်းပြီး ကုလားပွဲစားက ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလာထုတ်တာပေါ့...။ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေက စက်ရုံဈေးသိန်း၂၅၀ပဲ သွင်းရတော့ ငွေသိန်း ၄၅၀က အလကားရလိုက်တာပေါ့ .. ထီပေါက်သလိုပေါ့ သူတို့အချင်းချင်း ဝေစားမျှစား ပြသနာ မရှာအောင် အလကားပေးစားတဲ့ သဘောပေါ့ အကိုရာ.. နောက် Double Cab ကိုနောက်က အမိုးတွေ ဘာတွေနဲ့ လုပ်ထားတော့ ဇိမ်ခံကားလို့ စီးလို့ရတယ်လေ. တစ်ချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတို့သားသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်လာထုတ်ကြပြီး ပြီးတော့ ပြန်ရောင်းပေါ့..။
ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ စာရင်းအရ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေနာမည်နဲ့ ၆စီးထုတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နာမည်နဲ့က ၃စီးထုတ်ပါတယ်.. ဒါကျွန်တော်ရှိတုန်းက မှတ်ထားမိတဲ့ စာရင်းပေါ့...။ ဦးပိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးက လက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်..။ အဲ့ဒါတွေက တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို အစီး ၃၀၀ကျော် ၄၀၀ကြားမှာလေ.. အဲ့ဒါသူတို့ အတွက်ကြီးပဲလေ.. အဓိကအကိုရာ ဂျပန်ကုမ္ပဏီက အဓိကလိုချင်တာ Open ဖွင့်ပေးပါ.. ပြည်သူလူထုတွေပါ ရောင်းပေးပါ.. အစီးရေ တစ်သောင်းထုတ်ပေးပါ.. စက်ရုံကြီးတွေဆောက်ပေးမယ် များများထုတ်ပေးမယ် ပြည်သူတွေကို Open ဖွင့်ရောင်းပေးပါ.. ပြောတော့..။ သူတို့က ဂျပန်တွေကို ဘာပြောလည်းဆိုတော့ ငါတို့တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲတယ် .. အဟောင်းပဲ ဝယ်စီးနိုင်တာ. အသစ်ဝယ်စီးမယ့် အစားအဟောင်း ၃စီး လောက်ဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းစားလို့ ရတယ်လို့ ပြောတယ်လေ.. ဒါဆိုသူတို့ဘာလို့ ဝယ်စီးလဲ.. ဂျပန်ကားအစုတ်တောင် အပြင်မှာ သိန်းသုံး လေး ငါးရာပေးဝယ်နေရတာ။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီကလည်း သိသိကြီးနဲ့ ခံနေရတာလေ..။ သူတို့တွေက ဒီကားတွေကို သူတို့စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက်ပဲ မျောပြီး မျှင်းပြီး ထုတ်ချင်တာလေ.. ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်းလဲ.. ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က သူတို့လူကြီးတွေဗျာ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်စိမ်စိမ်နဲ့ စားလို့ရအောင် စိတ်ဝမ်းမကွဲအောင် လုပ်ထားတာပေါ့.. အကိုရာ ဗိုလ်မှုးကြီးအဆင့်ရတာနဲ့ ကားဝယ်ခွင့် သေချာပေါက်ရပြီ.. ။ စက်ရုံမှာ ဦးစီးတာကလည်း ဘာမှ မသိတဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးပဲလေ..။
ကိုဒီမိုရေ နောက်တစ်ခေါက် ဂျပန်နိုင်ငံက ODA နဲ့ ကျောင်းတွေ လာဆောက်ပေးတဲ့ ဂျပန် NGO အဖွဲ့Green Grass Association ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေ အကြောင်း ဖွင့်ဟချက်ကို ရေးပို့လိုက်ပါမယ်။